Jetpack- သင့် WordPress Site အတွက် ပြည့်စုံသော လုံခြုံရေးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းကို မှတ်တမ်းတင်နည်း | Martech Zone
Jetpack- သင့် WordPress ဆိုက်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လုံခြုံရေးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းကို မှတ်တမ်းတင်နည်း
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 9, 2022 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 9, 2022 Douglas Karr
သင်၏ WordPress စံနမူနာကို စောင့်ကြည့်ရန် လုံခြုံရေး ပလပ်အင် အနည်းငယ်ရှိသည်။ အများစုသည် လော့ဂ်အင်ဝင်ထားသော အသုံးပြုသူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ကြပြီး လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ကွဲသွားစေနိုင်သည့် ပလပ်အင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်ကို ပြင်ဆင်ထားသည့် သင့်ဆိုက်ကို အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ထားနိုင်သည်။ တစ်ခုရှိခြင်း။ လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း ဤပြဿနာများကို ခြေရာခံရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှုများကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်သည့်ပြင်ပရှိပြင်ပပလပ်အင်အများစုနှင့်တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်သင်၏ WordPress ဆိုက်အတွင်းလည်ပတ်နေသော်လည်း၊ ဒါဆို မင်း site ကျသွားရင်... ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုကြည့်ဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင်မလုပ်နိုင်ဘူး။
Jetpack WordPress တွင် ပလပ်အင်တစ်ခုတည်းမှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် အခမဲ့နှင့် အခပေးငွေယူ နှစ်မျိုးလုံး အင်္ဂါရပ်များစုစည်းမှုဖြစ်သည်။ Jetpack အတွက် အကြီးမားဆုံး ကွဲပြားချက်မှာ WordPress ၏ ပင်မကုဒ်ဖြစ်သော Automattic ကို တီထွင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းက ရေးသား၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ထိုထက်ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး သဟဇာတဖြစ်သော ပူဇော်သက္ကာကို သင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မရနိုင်ပါ။
On Martech Zoneနှစ်ခုစလုံးကို စာရင်းသွင်းလိုက်တယ်။ Jetpack ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သူတို့ရဲ့အဖြစ် ဆိုက်ကိုရှာရန်ထူးထူးခြားခြား အတွင်းပိုင်းရှာဖွေမှုရလဒ်များအပြင် သင့်ရှာဖွေမှုကို ကျဉ်းသွားစေရန်အတွက် အံသြဖွယ်ကောင်းသော စစ်ထုတ်မှုရွေးချယ်စရာအချို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရင်းသွင်းခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ပါသည်။ Jetpack လုံခြုံရေးပံ့ပိုးပေးသော၊
အလိုအလျောက် WordPress အရန်သိမ်းဆည်းမှုများ 1 ကလစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရယူပါ။
WordPress malware ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး အဓိက ဖိုင်များ၊ အပြင်အဆင်များနှင့် ပလပ်အင်များပေါ်တွင် – သိထားသည့် အားနည်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း အပါအဝင်။
WordPress brute force တိုက်ခိုက်မှုကာကွယ်မှု အန္တရာယ်ရှိသော တိုက်ခိုက်သူများထံမှ
စက်ရပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။ အီးမေးလ်သတိပေးချက်များနှင့်အတူ (သင့် site ကိုအရန်သိမ်းသောအခါအကြောင်းကြားစာများနှင့်အတူ)
မှတ်ချက် spam ကာကွယ်မှု ရယ်စရာကောင်းတဲ့ comment bot တွေအတွက်
လုံခြုံသော စစ်မှန်ကြောင်း အထောက်အထား - WordPress ဆိုက်များသို့ လျင်မြန်စွာ လုံခြုံစွာ ဝင်ရောက်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်သော two-factor authentication ကို ထည့်ပါ။
Jetpack ၏ လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များအတွင်း ဝှက်ထားသော ကျောက်မျက်ရတနာသည် ၎င်း၏ဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းသော်လည်း၊ ပင်မ WordPress ဆိုက်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ site တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့် အဖြစ်အပျက်တိုင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းကို ကျွန်ုပ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်-
အဆိုပါ Jetpack လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း ခြွင်းချက်ရှိသော စစ်ထုတ်ခြင်းအချို့ရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အား အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်ချက်၊ ပို့စ်နှင့် စာမျက်နှာလုပ်ဆောင်ချက်၊ မီဒီယာပြောင်းလဲမှုများ၊ ပလပ်အင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ မှတ်ချက်များ၊ အရန်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့် ပြန်လည်ရယူမှုများ၊ ဝိဂျက်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဝစ်ဂျက်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဆိုက်ဆက်တင်အပြောင်းအလဲများ၊ အချိန်မရပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အပြင်အဆင်အလိုက် အပြောင်းအလဲများ။
လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း ဆိုဒ်တိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရပြီး အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းကိုဖောက်ဖျက်ပါက ဆိုက်ကိုပြုပြင်ခြင်းမှ မှန်းဆချက်ထုတ်ခြင်းမှ WordPress စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို အတိအကျ သိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Jetpack တွင် သင်၏ Activity Log in ကိုလည်း အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော iOS သို့မဟုတ် Android အတွက် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် Mobile App လည်း ပါရှိပါသည်။ တူညီသောရက်စွဲအပိုင်းအခြားနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစား စစ်ထုတ်မှုများအားလုံးကို မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွင်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
WordPress ဆိုဒ်ပေါင်း5သန်းကျော်သည် ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်လုံခြုံရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Jetpack ကို ယုံကြည်ပါသည်။ Jetpack သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အကြိုက်ဆုံး WordPress plugins.
Jetpack လုံခြုံရေးဖြင့် စတင်လိုက်ပါ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- ကျွန်ုပ်သည် သက်ဆိုင်သူဖြစ်သည်။ Jetpack, Jetpack ရှာဖွေရေးနှင့် Jetpack လုံခြုံရေး.
Tags: လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းwordpress backup များကိုအလိုအလျှောက်လုပ်ခြင်းအလိုအလျောက်Jetpackjetpack လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းjetpack မိုဘိုင်းအက်ပ်jetpack ပရော်ဖက်ရှင်နယ်jetpack လုံခြုံရေးWordPresswordpress လှုပ်ရှားမှု lgowordpress စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြခြင်း။wordpress backups များwordpress သည် brute force attack ဖြစ်သည်။wordpress မှတ်ချက် spamwordpress မှတ်ချက် spam ကာကွယ်မှုwordpress စက်ရပ်ချိန်သတိပေးချက်များwordpress စက်ရပ်ချိန်မော်နီတာwordpress malware စကင်န်wordpress malware စကင်နာwordpress malware စကင်န်ဖတ်ခြင်း။wordpress မိုဘိုင်း appwordpress plugin ကိုwordpress plugin လှုပ်ရှားမှုwordpress သည် လုံခြုံသော စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြခြင်း။wordpress လုံခြုံရေးwordpress လုံခြုံရေးမိုဘိုင်းအက်ပ်wordpress ဆောင်ပုဒ်လှုပ်ရှားမှုwordpress two-factor authentication
မှန်ကန်သော DAM သည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်